Wirathu calls UN envoya‘whore’ ကုလသံကို ဦးဝီရသူ ဆဲဆို | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အရှင်နာဂသေန (မဘသ) အဖွဲ့ထဲသုို့ မ၀င်ရခြင်းအကြောင်းရင်း
Charlie မဂ္ဂဇင်း တိုက်ခိုက်မှု အနောက်ကမ္ဘာမှ ထောက်လမ်းရေး လက်ချက်ဟု ပြင်သစ် Front National (FN) ပါတီ တည်ထောင်သူပြော »
Wirathu calls UN envoya‘whore’ ကုလသံကို ဦးဝီရသူ ဆဲဆို
စနေလင်း| January 19, 2015
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၏ ရိုဟင်ဂျာဟု ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ခေါ်ဆိုကြသည့် ဘင်္ဂါလီများအား နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးပေးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင် ကန့် ကွက် ရှုတ်ချရာတွင် ဦးဝီရသူ က ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ယန်ဟီးလီအား “ဖာသည်မ”ဟု ခေါ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများကိုလည်း “ဒီကောင်မတွေ” ဟု ရင့်သီးစွာ သုံးစွဲပြောဆိုထားသော ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဖေ့ဘွတ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ပြန့်နှံ့နေသည်။ (https://www.youtube.com/watch?v=zAPA7NKynbU တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။)
This entry was posted on January 20, 2015 at 2:40 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.